नेपालका कान्छा अभियन्ता खनाललाई भारतमा ‘युथ आइकन अवार्ड’ - Rising Dainik
October 2, 2020 October 2, 2020 Ramash KunwarLeaveaComment on नेपालका कान्छा अभियन्ता खनाललाई भारतमा ‘युथ आइकन अवार्ड’
भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा शुक्रबार राइजिङ टुइकल फाउन्डेसनको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा उनलाई युथ आइकन अवार्डबाट सम्मान गरिएको हो। समाजमा उदाहरणीय कार्य गरेको ठहरसहित फाउन्डेसनले खनाललाई सम्मान गरेको हो। सानै उमेरमा संघीय राजधानी काठमाडौं सहितका विभिन्‍न जिल्लामा स्वच्छता र सरसफाइ अभियान चलाइरहेका उनले असहाय र गरिबलाई पनि सहयोग गर्दै आइरहेका छन्।
उनले सामाजिक अभियान चलाएरै बाजुरामा अनाथाश्रम निर्माण गरेका छन्। सामाजिक काममा जुटिरहेका खनाल पछिल्लो समय कैलालीमा ‘हेल्प निडी अभियान’का क्रममा छन्। जहाँ उनले मजदुर र गरिबहरको घर-घरमा खाद्यान्‍न उलब्ध गराउँदैछन्।
विश्व भर्चुअल तेक्वान्दो महोत्सवका लागि नेपाली अन्तर्राष्ट्रिय निर्णायक अशोक खड्का प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने निर्णायक मण्डलमा छनोट भएका छन् । युएस वल्र्ड क्लास तेक्वान्दो संघको आयोजनामा प्रतियोगिता अक्टोबर १०, ११, १७ र १८ तारिखमा हुने छ ।
प्रधानमन्त्रीको यो एक निर्णयले माधव नेपाल फिदा, खुलेरै गर्न थाले ओली सरकारको प्रशंसा !
माधव नेपाल माथि ओलीको थप का’रवाही, सांसद पद खारेज, पार्टीबाट आउट !
April 13, 2021 April 13, 2021 Ramash Kunwar
बालुवाटारमा कालो मास्क लगाउन नि’षेध
April 25, 2021 Ramash Kunwar